July 2017 | Myanmar Computer Professionals Associations
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန) မှ တတိယနှစ် နှင့် စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနား
Submitted by mcpa on Wed, 07/26/2017 - 17:08
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန) မှ တတိယနှစ် နှင့် စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည်(၂)နာရီ မှ (၃)နာရီအထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန)တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ စာရင်းစစ် ဦးကျော်သူရအောင်မှ "Web Development Technologies & Job Opportunities (Local & Abroad) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ပါသည်။
Read more about ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန) မှ တတိယနှစ် နှင့် စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနား
July 30, 2017 (Sunday) Sedona Hotel Grand Ballroom တွင် ကျင်းပမည့် JobNet IT & Tech Career Expo
Submitted by mcpa on Tue, 07/25/2017 - 16:00
**Insights into the Future of IT in Myanmar**
**Meet Industry Experts and Top Companies**
**Advance your Career**
MCPA supports this event and if you come you will haveachance to meet and listen to the advice of
our experienced senior members:
- U Nyein Oo - Vice President
- U Min Aung Kyaw - Executive Committee
- U Ravi - Secretary
You will have the chance to gain access to employers seeking talented candidates in most areas,
ranging from Computer and Information Systems, IT Systems, Network Management, Programming,
Web Administration, and everything in between.
Find the FULL AGENDA and Register at https://www.jobnet.com.mm/tech-career- expo and join us
shape the future of Tech and IT in Myanmar.
July 30, 2017 (Sunday) Sedona Hotel Grand Ballroom တွင် ကျင်းပမည့် JobNet IT & Tech Career Expo ကို လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ပွဲတွင် Programming, Network Management, IT Systems အစရှိသည့် နယ်ပယ်များမှ IT ပညာရှင်များကို အလုပ်ခေါ်ယူသွားမည့်အပြင် ဝါရင့်ဆရာကြီးများ၏ ဟောပြောပွဲအစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် Preregister လုပ်ရန်အတွက် https://www.jobnet.com.mm/tech-career-expo ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
July 30, 2017 (Sunday) Sedona Hotel Grand Ballroom တြင္ က်င္းပမည့္ JobNet IT & Tech Career Expo ကို လာေရာက္ဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
ပြဲတြင္ Programming, Network Management, IT Systems အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ IT ပညာရွင္မ်ားကို အလုပ္ေခၚယူသြားမည့္အျပင္ ဝါရင့္ဆရာၾကီးမ်ား၏ ေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ပြဲအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ Preregister လုပ္ရန္အတြက္ https://www.jobnet.com.mm/tech-career-expo ဝင္ေရာက္နိုင္ပါသည္။
Read more about July 30, 2017 (Sunday) Sedona Hotel Grand Ballroom တွင် ကျင်းပမည့် JobNet IT & Tech Career Expo
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန) မှ တတိယနှစ် နှင့် စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားသတင္း
Submitted by mcpa on Thu, 07/20/2017 - 16:49
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန) မှ တတိယနှစ် နှင့် စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည်(၂)နာရီ မှ (၄)နာရီအထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန)တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ စာမေးပွဲကော်မတီဉက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဇော်မြင့် မှ "Today Networking And Vital Of Infosec" ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြန်ကြားရေးကော်မတီဉက္ကဋ္ဌဦးဝေလင်းထွန်းမှ " IT Technologies & Business Usages" ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။
Read more about ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန) မှ တတိယနှစ် နှင့် စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ဟောပြောပွဲအခမ်းအနားသတင္း
2017 Tech Expo Career အခမ္းအနားတြင္ MCPA မွ Supporting Association အေနျဖင့္ ပါဝင္မည့္သတင္း
Submitted by mcpa on Mon, 07/17/2017 - 11:02
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀) ရက္ ၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ Job Net မွ ႀကီးမႉး၍ Sedona Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ 2017 Tech Expo Career အခမ္းအနားတြင္ MCPA မွ Supporting Association အေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Panel (၄) ခု အစီအစဥ္တြင္ MCPA ၏အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
MCPA မွ Booth ရွိမည္ၿဖစ္ၿပီး အဆိုပါ Booth တြင္ Member Service Desk ထားရွိ၍ အသင္းဝင္လက္ခံျခင္း၊ MCPA Professional Series စာအုပ္မ်ားေရာင္းေပးျခင္း ႏွင့္ အသင္းသားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။
Read more about 2017 Tech Expo Career အခမ္းအနားတြင္ MCPA မွ Supporting Association အေနျဖင့္ ပါဝင္မည့္သတင္း
2017 Tech Expo Career အခမ်းအနားတွင် MCPA မှ Supporting Association အနေဖြင့် ပါဝင်မည္
Submitted by mcpa on Sun, 07/16/2017 - 16:23
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Job Net မှ ကြီးမှူး၍ Sedona Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် 2017 Tech Expo Career အခမ်းအနားတွင် MCPA မှ Supporting Association အနေဖြင့် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Panel (၄) ခု အစီအစဉ်တွင် MCPA ၏အလုပ်အမှုဆောင်များမှ ပါဝင်ဆွေးနွေး ဟောပြောပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
MCPA မှ Booth ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ Booth တွင် Member Service Desk ထားရှိ၍ အသင်းဝင်လက်ခံခြင်း၊ MCPA Professional Series စာအုပ်များရောင်းပေးခြင်း နှင့် အသင်းသားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
Read more about 2017 Tech Expo Career အခမ်းအနားတွင် MCPA မှ Supporting Association အနေဖြင့် ပါဝင်မည္
Submitted by mcpa on Fri, 07/14/2017 - 14:33
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် (၁၄) ရက် သောကြာနေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီမှ နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနမှ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ (၃၆) ဦးနှင့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနမှ တတိယနှစ်၊ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ (၃၀) ဦးတို့အား MICT Park၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေရှိ ACE Data Systems Co.,Ltd , Yadanarpon Teleport, Kanaung Hub, Kernellix Pte.,Ltd, NetScriper Web Design Company များသို့ Industry Tour လေ့လာရေး သွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Read more about ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာန နှင့်ဒဂုံတက္ကသိုလ်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနမှ ကျောင်းသား၊ကေျာင်းသူများ၏ Industry Tour သွားရောက်လေ့လာခြင်း
Submitted by mcpa on Mon, 07/03/2017 - 10:44
သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Besides Myanmar 2017 (Information Security Conference) ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ(၂) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ နံနက် (၉)နာရီမှ ညနေ (၅:၃၀)အထိ Conference Hall, Main Building, MICT Park တွင် ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ
-Exploit Development ( kernel,browser,app,...)
- Adv wireless attack research/demo (3g,4g,802.11(x))
- IoT security research/exploitation
- Smart Devices and Smart Card Hacking
- Mobile arm security research/exploitation
- Bring your own Tool ( Showcase / Release )
- Incident Response and Attack Analysis
- Real World Hack ( BugBounty/CVE/HallofFame )
- Mobile Applications Attack
- Thick Client Applications Attack
အစရှိသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ဆွေးနွေးဟောပြောပေးခဲ့ပြီး၊ စိတ်ပါဝင်စားသူ (၂၅၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Read more about Bsides Myanmar Information Security Conference 2017 Yangon